Top 13 Sare-Seminary Seminary Deeq waxbarasho
Maqaalkan, waxaad ku baran doontaa oo sidoo kale marin u heli doontaa iskuxirka faahfaahinta arjiga ee dhowr deeqo waxbarasho oo seminary ah oo aad ka heli karto halkaas oo u furan si aad uga hesho arjiga qaybaha kala duwan ee ardayda.
Kaqeybgalka kuliyada fiqiga ama seminar-ka si loogu tababaro wasiir ahaan waxay ubaahantahay lacag aad u badan sida waxbarasho walba oo caadi ah. Tani waxay nuugi kartaa miisaaniyadaha ardayda waxayna geli karaan amaahda. Nasiib wanaagse, deeqda waxbarasho ee seminary-ga oo buuxa ayaa u timid inay yareyso dhibaatadan.
Marka, haddii aad rabto inaad dhigato seminary ama kuliyad fiqi ahaaneed oo aadan haysan miisaaniyadda waxbarashadaada, waad dalban kartaa mid ka mid ah kuwan seminar-ka ah ee seminary-ka. Intaas waxaa sii dheer, kaalmooyinkan lacageed waxaa kafaala qaadaya aasaaska iimaanka iyo lacagaha xusuusta.
U gudub shaxda waxyaabaha hoose si aad u aragto waxyaabaha ugu muhiimsan ee maqaalka.
Suurtagal ma tahay in la helo deeq waxbarasho oo seminary ah?
Maxaa loo baahan yahay si loo helo deeq waxbarasho seminary-buuxa ah?
Deeqaha Seminary Sare ee Sare
Deeqda waxbarasho ee Madaxweynaha - Seminary Denver
Sordeniga fiqiga ee Gordon-Conwell - Hamilton
ATLA Deeqda Laybereeriyada
Lacagaha Deeqaha GCF
Diamonds ee Deeqda Wasaaradda Waxbarashada
Seminary Seminary fiqi ah
Codsiga deeqda waxbarasho ee Boqortooyada, Seminary Denver
Kaqeybgalka Codsiga Deeqda Rajada, Seminary Denver
Adrienne M. iyo Charles Shelby Rooks Deeqda
Holly Elliott iyo Deeqaha Laurel Glass
Socdaalka Wasaaradda Waxbarashada
George iyo Lynna Gene Cook deeq waxbarasho
Shahaadada Seminary ee Lorene L. Gerdon
Haa! Waxaad heli kartaa deeq waxbarasho oo seminary ah haddii aad buuxiso shuruudaha u-qalmitaanka ee deeqdaas seminary. Inta badan deeqaha waxbarasho ee seminary-ka waxay kuxirantahay codsadaha asalka diimeed, taariikhda tacliimeed, tayada hogaaminta, iyo xirfadaha.
Haddii aad rabto inaad ku guuleysato deeq waxbarasho oo seminary ah, waxaad ku bilaabi doontaa xulashada dugsiga seminary ee aad dooratay. Markaad doorato dugsiga seminary, waxaad hubin doontaa shuruudaha deeqda waxbarasho ee seminary-ga oo aad rabto inaad dalbato. Hubso in isku-darkaaga GPA uusan ka hooseynin 3.0 maadaama ay tani tahay ugu yaraan GPA inta badan deeqaha waxbarasho.
Markaad la kulanto shuruudaha u-qalmitaanka, soo ururi dukumintiyada lagama maarmaanka ah oo ay ku jiraan waraaqaha talo-bixinta, qoraallada rasmiga ah, qoraallada, iwm, oo codso sida ugu dhakhsaha badan. Hubso inaad muujiso waxa kaa dhigaya mid gaar ah dalabkaaga. Tani waa sababta oo ah iskuulada seminary-ku waxay raadinayaan arday aan kaliya fiicnayn laakiin ardayda leh sifooyin hoggaamineed oo wanaagsan.
Dhanka kale, codsiga deeqda waxbarasho wuxuu u baahan karaa lacag yar. Hubso inaad kaydso diiwaangelinta.
Ula dhaqan wareysigaaga deeqda waxbarasho sida wareysiga shaqada. Samee cilmi-baaris ku filan oo ku saabsan dugsiga seminary-ka oo weydii su'aalaha ardayda dugsiga adoo adeegsanaya mid kasta oo ka mid ah wadiiqooyinka taageerada dugsiga ka hor wareysigaaga. Macluumaadka la ururiyey ayaa kaa caawin doona inaad heer sare gaarto inta lagu guda jiro wareysiga deeqda waxbarasho ugu dambayntiina waxaad ku guuleysan doontaa abaalmarinta.
Waa kuwan liistada deeqaha waxbarasho sare ee seminary-ga sareeya:
Ujeedada loo aasaasayo deeqda waxbarasho ee Madaxweynaha Denver Seminary waa in la caawiyo ardayda cusub ee ka diiwaangashan Denver oo aan haysan lacag ay ku sii wataan waxbarashadooda seminaryka. Ardaydani waxay leeyihiin khibrad heer sare ah oo wasiirnimo, biseyl, iyo diiwaanno tacliimeed.
Ka-faa'iideystayaasha abaalmarinta maaliyadeed waa inay diyaar u ahaadaan inay dhammaystiraan mastar buuxa oo shahaadada ilaahnimada ah ee seminaryka. Muddada daraasaddu waa saddex (3) sano. Intaa waxaa sii dheer, waa inay u adeegaan wasaarad maxalli ah ama kaniisad inta ay ku guda jiraan waxbarashadooda Seminary Denver.
Qiimaha deeqdani waa $ 15,000 oo loogu talagalay waxbarashada sanad dugsiyeedka iyo $ 10,000 ee loogu talagalay hoyga xerada. Kuwaas oo dhami waxay dabooli doonaan kharashka waxbarashada iyo guryaha ee ardayda waqti-buuxa ah.
Maaddaama mid ka mid ah deeqaha ugu sarreeya ee seminary-ka, seminaryku uu aasaasay gargaarkan si uu u caawiyo saddex wada-jir oo afar arday ah lixda sano ee soo socota.
Sordariska fiqiga ee Gordon-Conwell wuxuu bixiyaa abaalmarino maaliyadeed oo daboolaya kharashka waxbarashada ardayda kuqoran seminaryka fiisada F-1.
Deeqda waxbarasho waa la cusbooneysiin karaa, si kale haddii loo dhigo, dadka qaata waxay dib u cusbooneysiin karaan abaalmarinta sannad kasta inta lagu jiro muddada daraasadda iyagoo si fudud u ilaalinaya diiwaannada tacliinta.
Codsadayaasha doonaya inay ku noqdaan wadankoodii hooyo si ay u siiyaan hoggaanka Masiixiyiinta markay ka qalin jabiyaan seminary ayaa loo tixgelin doonaa abaalmarinta.
Seminarka wuxuu siiyaa abaalmarinta maaliyadeed ardayda uqalma kaliya bilowga barnaamijka barashada seminarka. Si kastaba ha noqotee, ardayda iska diiwaangelisa seminary iyada oo aan lahayn Deeqda-waxbarasho ee Ardayda Caalamiga ahi xaq uma yeelan doonaan deeqda waxbarasho
Ururka maktabadda fiqiga ee Mareykanka (ATLA) ayaa kafaala qaadaya deeqdan waxbarasho. Waxaa loogu talagalay ardayda diinta aan qaddarinta lahayn, qowmiyadda, ama jinsiga oo bixiya koorsooyin maktabado fiqi ahaaneed marka lagu daro barnaamijkooda mastarka ALA ee la aqoonsan yahay ee maktabadda iyo sayniska macluumaadka.
ATLAS waxay bixisaa laba ka mid ah deeqdan waxbarasho sanad walba ardayda fiqiga iyo daraasaadka Masiixiyiinta. Abaalmarintan maaliyadeed waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee seminary-ga oo buuxa.
Si aad ugu qalanto deeqdan waxbarasho, codsadayaashu waa inay xubin ka noqdaan ATLA ama iska diiwaangeliyaan xubin ka mid ah ururka.
Emailka deeqda waxbarasho ayaa ah xubinrep@atla.com.
Graduate Christian Fellowship (GCF) waxay ardayda siisaa sanad walba deeq waxbarasho si ay ugu daba galaan cilmiga fiqi ahaaneed, kitaabiga ah, ama diinta ee heerka qalin-jabinta kadib. Waa qayb ka mid ah himilada GCF inay hubiso in dadka haysta wicitaanka Eebbe lagu maalgeliyo inay raacaan tacliinta sare ee fiqiga.
Sida mid ka mid ah deeqda waxbarasho ee seminary-ka, waxaa lagu maalgeliyaa tabarucaadka GCFers iyo asxaabta. Qiimaha deeqdani waa $ 5,000 sanadkiiba muddo saddex sano ah. Waxay ku saleysan tahay mudnaan codsadayaashuna waa inay muujiyaan baahi dhaqaale.
Markay qalin jabiyaan, qaatayaashu waa inay u qoraan hal-abuurnimo GCF saamaynta iyo saamaynta ay ku leeyihiin waxbarashadooda markay ka qalin jabiyaan wasaaradda, goobta shaqada / fiqiga xirfadda, iimaanka iyo arrimaha shaqada, ama iimaanka iyo arrimaha dhaqanka, si loogu adeego urur masiixi ah oo fadhigiisu yahay Singapore. ugu yaraan shan sano.
Si aad xaq ugu yeelatid, codsadayaashu waa inay noqdaan muwaadiniin ama degane joogto ah ee Singapore. Intaa waxaa sii dheer, waa inay diyaar u ahaadaan inay taageeraan aasaaska caqiidada GCF ayna u heellan yihiin kaniisaddooda.
Dheeman ku jira Wasaaradda Qallafsan waa urur aan macaash doon ahayn oo ka dhisan Mareykanka. Aasaasiyadan ayaa looga golleeyahay in la siiyo fursado deeq waxbarasho haweenka waayeelka ah ee dugsiga sare ee Texas si ay u sii wataan daraasadaha wasiirnimo ee qalin jabinta ee fiqiga, daraasaadka Masiixiyiinta, diinta, ama dhinacyada la xiriira.
Qiimaha abaalmarintu wuu kala duwan yahay iyadoo ku saleysan tirada codsadayaasha. Waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee seminary-ga oo buuxa.
Si aad ugu qalanto abaalmarinta deeqda waxbarasho, codsadayaashu waa inay noqdaan dumar kuwaas oo ku raad jooga waxbarashada dugsiga sare ee Texas. Intaas waxaa sii dheer, waa inay noqdaan arday ka qalin jabisay dugsiga sare iyo muwaadiniin ama degane rasmi ah ku jooga Mareykanka
Sannad kasta, Charles E. Fuller wuxuu siiyaa deeqo waxbarasho ardayda haysata diiwaanno tacliimeed oo heer sare ah oo raadinaya shahaadooyinka fiqiga ee Seminary Fiqiga ee Fuller. Warbixinadu waxay muujinayaan in ka badan 2,000 oo arday inay ka faa’iideysteen abaalmarintan.
Deeqdani waxay dabooli doontaa 15% ee lacagta qaataha sanadlaha. Si kastaba ha noqotee, qorshuhu wuxuu siiyaa deeqo waxbarasho oo ku saleysan tiro kooban oo ka mid ah ardayda imaanaysa seminarka. Deeqdan ku saleysan mudnaanta waxay dabooli doontaa 25% ilaa 100% ee ka-faa'iideystayaasha waxbarashadiisa.
Ujeedada Aqoonyahanada Boqortooyada ee deeqda waxbarasho ayaa ah in la siiyo kaalmo lacageed ardayda mudan ee Master of Divinity ee raadinaya shaqooyinka wasaarada waqtiga buuxa oo ay ku jiraan wadaad, wadaad dhalinyaro ah, wadaad cibaado, la taliye, beeraha kaniisada, ama adeegayaal.
Deeqdani waxay dabooli doontaa 50% ee waxbarashada ardayga waxaana loogu talagalay ardayda cusub oo keliya. Waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee seminary-ka ee buuxa.
Si aad xaq ugu yeelatid abaalmarinta, codsadayaashu waa inay ahaadaan kuwo degan Mareykanka oo uqoran daraasado waqti-buuxa ah ee barnaamijka Masters of Divinity. Waa inaysan ka weyneyn da'da 35 sano waana inay ku sii wadaan xirfadahooda shaqo waqti-buuxa ah markay qalin jabiyaan. Intaa waxaa sii dheer, codsadayaashu waa inay lahaadaan GPA isugeyn ah oo ah 3.1 isla markaana ay sii wadaan GPA isugeyn ah oo ah 3.25 inta ay ku jiraan dugsiga.
Deeqda Rajada Ka-qaybgalka waxaa la siiyaa ardayda cusub ee soo socota ee ku raad-jooga Master of Divinity ama barnaamijka Master of Arts ee Jaamacadda Denver. Abaalmarintan deeqdani waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee seminary-ga oo buuxa.
Waxay ka kooban tahay 50% ilaa 100% ee waxbarashada qofka qaata. Si aad xaq ugu yeelatid, codsadayaashu waa inay kaqornaadaan Master of Divinity ama barnaamijka Master of Arts ee daraasadaha waqtiga-buuxa ee Seminary Denver. Musharrixiinta waa inay sidoo kale muujiyaan baahiyaha dhaqaale oo ay leeyihiin diiwaanno tacliimeed oo heer sare ah.
Adrienne M. iyo Charles Shelby Rooks Scholarship waxaa loogu talagalay inay taageeraan waxbarashada seminary ee xubnaha kaniisadda Midoobey ee Masiixiga (UCC) ee ka soo jeeda qowmiyadaha iyo qowmiyadaha aan lagu matalin kaniisadda kuwaas oo u heellan inay u adeegaan UCC.
Xubnahan waa inay iska diiwaangeliyaan iskuul fiqiga ah oo ay aqoonsan yihiin Ururka Iskuullada Fiqiga ee Mareykanka iyo Kanada. Intaa waxaa sii dheer, kaalmada waxaa heli kara xubnaha UCC oo ah African-American, Hispanic-American, Asian-American, Native-American Indian, ama Pacific Islander.
Qiimaha deeqda waxbarasho waa $ 5,000. Waa mid ka mid ah deeqda waxbarasho ee seminary-ga oo buuxa.
Holly Elliott iyo Laurel Glass Scholarship ayaa loo aasaasay inay ka caawiyaan ardayda dhagaha la 'ama dhagoolayaasha-indhoolayaasha ah inay helaan waxbarasho seminar ah si loogu diyaariyo wasaaradaha khaaska ah ee kaniisadda ama loo caleemo saaro.
Qiimaha deeqdani wuu kala duwan yahay wadarta abaalmarinada la bixiyayna waa $ 50,000.
Si loo dalbado Holly Elliott iyo Laurel Glass Scholarship, musharrixiinta waa inay bixiyaan qoraal, warqad talobixin ah, foom codsi, bayaan shakhsiyeed, qoraal rasmi ah, iyo caddaynta naafonimada.
Sannad kasta, Guddiga Guud ee Tacliinta Sare iyo Wasaaradda (GBHEM) waxay bixiyaan deeqo waxbarasho oo loogu talagalay safarka. Deeqdan waxbarasho ayaa loo heli karaa shahaadada koowaad ama heerka qalin-jabinta ee ardayda laga tirada badan yahay ee jinsiyadaha ah ee raadinaya wasaaradda loo magacaabay (deacon ama oday).
Maaddaama mid ka mid ah deeqda waxbarasho ee seminary-ga ah, Journey Toward Ordained Scholarship uu u qalmo $ 5,000.
Si aad ugu qalanto abaalmarinta, codsadayaashu waa in aanay ka badnayn da'da 30 oo ay ku raadsanayaan shaqo wasaarad, fiqi, daraasaadka Masiixiga, Baybalka, ama diinta.
Musharrixiinta waa inay sidoo kale ahaadaan xubno ka tirsan Kaniisadda Methodist United ugu yaraan 2 sano waana inay ka qaybgalaan Methodist-ka United ee la xidhiidha machadka. Codsadayaashu waa inay ilaashadaan ugu yaraan CGPA ee 2.85 ee shahaadooyinka shahaadada koowaad iyo 3.0 ee shahaadooyinka qalin-jabinta.
The George iyo Lynna Gene Cook Scholarship waxaa bixiya Lincoln Community Foundation (LCF). Abaalmarintan deeq-lacageedka ah ayaa loo heli karaa waayeelka dugsiga sare ama kuwa ka qalin-jabiyay Nebraska ee raadinaya waxbarashada wasaaradda masiixiga sida fiqiga iyo diinta.
George iyo Lynna Gene Cook Scholarship waxay u dhigantaa $ 5,000 sanadkii waana mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee seminary-ga oo buuxa.
Si aad ugu qalanto, codsadayaashu waa inay lahaadaan ugu yaraan GPA isku-darka ah ee 3.0 ama wixii ka sareeya oo laga aqoonsan yahay jaamacadda Mareykanka. Tixgelin dheeraad ah ayaa la siin doonaa musharixiinta xubnaha firfircoon ka ah Kaniisadda Koowaad ee Ilaah.
The Lorene L. Gerdon Seminary Scholarship waxaa kafaala qaaday Iowa United Methodist Foundation (IUMF). Abaalmarintan lacageed waxaa heli kara ardayda raacda qalin-jabinta ama shahaadooyinka xirfadeed ee wasaaradda Masiixiyiinta. Ardaydani waa inay ka yimaadaan Appanoose, Davis, Mahaska, Marion, Monroe, ama Wapello waana inay xubno ka noqdaan Kaniisadda Methodist.
Maaddaama mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee seminary-ka ah, Lorene L. Gerdon Seminary Scholarship lagu qiimeeyo $ 7,500.
Musharrixiinta waxaa looga baahan yahay inay isqortaan ama damacsan yihiin inay iska diiwaangeliyaan shahaadada qalin-jabinta. Sidoo kale waa inay muujiyaan baahi dhaqaale.
Dugsiga Kitaabka Quduuska ah Deeqaha Buuxa ee Ardayda Caalamiga ah
Jaamacadaha Siiya Ardayda Caalamiga ah Deeqaha waxbarasho
Koorsooyinka Kitaabka Quduuska ah ee Bilaashka ah oo leh Shahaadada Dhammaystirka
Kulliyadaha Kitaabka Qudduuska ah ee Khadka Sare ee Qiime-jaban ee Qiimaynta Sare oo leh Faahfaahinta Ogolaanshahooda
9 Koorsooyinka Kelifida ee Darajada Kitaabka Quduuska ah
9 Kulliyadaha Kitaabka Quduuska ah ee Kitaabka Quduuska ah ee Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee ay tahay inaad ogaato
Deeq waxbarasho oo buuxa Barashada Hagaha Dibadda Dibedda Ku Baro Iyada oo Deeq waxbarasho la siinayo
Previous Post:15 Jaamacadaha ugu Qaalisan Yurub ee Ardayda Caalamiga ah
Post Next:Jaamacadaha ugu sareeya ee aqbalaya IELTS Dhibcaha 6 ee Yurub